Sergio Ramos iyo Florentino Perez Oo Isku Dhacay, Hadalladii Kululaa Ee Ay Is Dhaafsadeen Iyo Hanjabaaddii Madaxweynaha Ee Inuu Kabtanka Ka Eryi Doono Real Madrid – Latest Sports News
Sergio Ramos iyo Florentino Perez Oo Isku Dhacay, Hadalladii Kululaa Ee Ay Is Dhaafsadeen Iyo Hanjabaaddii Madaxweynaha Ee Inuu Kabtanka Ka Eryi Doono Real Madrid
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo kabtanka naadigaas Sergio Ramos ayaa hadallo kulul isku weydaarsaday gudaha qolka labbiska kaddib ciyaartii Ajax.
Madaxweyne Perez ayaa ciyaaryahannada Real Madrid ugu soo galay qolka labbiska waxaanu dusha uga tuuray canaan kulul, isagoo ku eedeeyey inay iyagu masuul ka yihiin bahdilaadda iyo ceebta soo gaadhay naadiga, laakiin Sergio Ramos oo isaguna dusha sare ka daawanayey kulan oo soo degay dhamaadkii ayaa si adag ugu jawaabay madaxweynaha, waxaanu u sheegay in kaligood aanay lahayn canaanta balse ay maamulkuna qayb ka yihiin.
Ramos ayaa si aan gabbasho lahayn u xasuusiyey Perez inay hore ugu sheegeen inuu kooxda keeno dhaliye fiican markii uu ka tegay Cristiano Ronaldo, laakiin uu iska dhego tiray.
Perez ayaa markaas kaddib ka cadhooday hadalka Ramos ee ay wada maqlayeen ciyaartoyga iyo shaqaalaha kooxdu, kaas oo sida uu wargeyska Marca qoray u ekaa mid aan xattaa ixtiraam badan ka muuqanin.
Markii uu hadalku kululaaday, ayaa waxa uu Perez ugu hanjabay Ramos inuu kooxda ka eryi doono, hase yeeshee Kabtan Sergio ayaa isaguna ugu jawaabay inuu siiyo lacagta inta uga hadhay heshiiskiisa, kaddibna uu diyaarba u yahay inuu ka tago iyadoo madaxiisu sare u taagan yahay.
Tababare Santiago Solari oo isaguna taagnaa madasha hadalladan kulul ay isku weydaarsanayeen Perez iyo Ramos ayaanu warku sheegin waxa uu ka yidhi iyo inuu soo kala dhex-galay, hase yeeshee Los Blancos ayaa gashay qalalaase xili ciyaareedka ay rajo la’aan ku noqotay waqti hore.